Iskena se3D, Inkqubo ye-ODM, uLawulo lweKhadi- FEELTEK
Iskena se-2.5D Uthotho
Iskena se3D-CO2 Uthotho
Iskena se3D-Ifayibha Uthotho
Iskena esiGreyini se-3D
Iskena se-3D-UV Uthotho
soloko ufumana okona kulungileyo
Fumana iisampulu zasimahla kunye neencwadi zemifanekisoYIYA
I-FEELTEK ijolise kwinkqubo yokugxila kwe-3D iminyaka. Sisoloko sigxininisa isuntswana lolawulo lwesoftware, uyilo olubonakalayo ngexesha lokuphumelela kunye nokusetyenziswa kwesicelo.
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, i-FEELTEK izimisele kwisicwangciso-qhinga "sokukhokelela ekuqhubekeni phambili kwe-laser ye-3D" kwaye isungule ii-serials ze-3D scanhead ezixhasa ubude be-10640/1064/980/532 / 355nm ngokukhetha ubukhulu besithuba 10/15/20/30 / 40/70 kwintengiso.
wazi ngakumbi malunga nenkampani
hlola eyethu iinkonzo eziphambili
Njengomlingane obalulekileyo wokudityaniswa kwe-laser, i-FEELTEK ihlala ibeka ukubaluleka kwesisombululo ngokwezifiso
Iilensi ze-aspheric ezintsha, amandla agxile ngakumbi kunye neyunifomu. Ubungakanani bamaza amaninzi kunye neenketho zentsimi yokusebenza
Ukuchaneka okuphezulu kwesantya esiphakamileyo sokushisa kobushushu obuphantsi. Isantya esiphakamileyo, ulawulo lobushushu olungaphantsi kolawulo galvanometer. Itekhnoloji yolawulo lokuqhuba ngokukodwa
Iprogram yeSicelo esizimeleyo. Inika iintlobo zezisombululo ezisemgangathweni ngokusekwe kwitekhnoloji yokugxila enamandla: ukumakisha ukubeka endaweni ebonakalayo, ukumakisha kumabala amakhulu, ukumakisha komhlaba kwe-3D, ukukrolwa komsizi, i-3D welding, izinto ezongeziweyo kunye nokukhupha, njl njl.
Inkqubo yolawulo oluzimeleyo yezixhobo zojongano ezininzi. Ujongano Robot, CCD, Ukuhambisa umgca, ukwanelisa inkqubo yoqeqesho.
I-FEELTEK iya kuba liqabane lakho elibalulekileyo le-2D ukuya kwi-3D inkqubo ye-galvo yokwenza ngokwezifiso
Ukubonelela ngokuchaneka okuphezulu, isantya esiphezulu, inkqubo yokugxininisa kozinzo olukhulu, uyilo lwendlela yomenzi obunelungelo elilodwa
I-FEELTEK iqokelele inani elikhulu lenkqubo ye-2D kunye ne-2.5 D yamava okuskena ngokwamava.
Iqabane elibalulekileyo lwezixhobo zokwenza i-galvanometer laser processing, linamathela ngokubaluleka okukhulu kwizisombululo zenkqubo elungiselelwe wena
Ukukrola ukhetshe (ithusi)
ukungunda / ukungunda
Indebe (ialuminiyam) Ukuphawula
Ukususa izinto ezizenzekelayo
Yophando ukuba pricelist
Ukususela ekusekweni kwayo, umzi-mveliso wethu uphuhlisa iimveliso zodidi lokuqala lwehlabathi ngokubambelela kumgaqo wobulunga kuqala. Iimveliso zethu ziye zaziwa ngokugqwesileyo kushishino kunye nexabiso lokuthenjwa phakathi kwabathengi abatsha nabadala ..
Kuthekani ukuba ayisiyi-2D kuphela ...
Ukongeza kwintloko yokuskena ye-FEELTEK 2D, ucinga ngokusebenziseka kunye nokuguquguquka, sikwabonelela ngeendlela ezahlukeneyo zemodyuli zabathengi abajolise kuzo ...
Ilebheli ye-FEELTEK yokumakisha ...
Kukho isicelo esandayo ngokubhekisele kwileyibhile yokumakisha kumacandelo oomatshini, ngakumbi kumzi mveliso we-auto, njengehabhu, ibhetri yemoto, isihluzi somoya njlnjl.
Ikrismesi emnandi kunye Nolonwabo N ...
Njengokuba u-2021 esiza kungekudala Masikhathalelane kwaye sixhase isidingo somntu wonke sempilo entle, isidlo sasemini esihle kunye nempumelelo. FEELTEK ngobulumko ...
I-FEELTEK inikezela nge-2D, 2.5D, 3D scanhead, DFM (Dynamic Focus Module), imodyuli ye-XY ye-OEM kunye nokwenza ngokwezifiso isoftware.
Ngomboneleli ngenkqubo yeshedyuli ngokubanzi, siyakholelwa ukuba i-FEELTEK iya kuba liqabane lakho onokulisebenzisa kwi-2D ukuya kwi-3D yentloko.
Inkampani yeTekhnoloji yeLaser yeFEELTEK
© Copyright - 2010-2021: FEELTEK Laser Technology Co, Ltd. Onke amalungelo agciniwe.